Qof “af duubtay” diyaarad Dubai u socotay oo toogasho lagu dilay
Qof rakaab ah oo looga shakiyay in uu isku dayay in uu af duubto diyaarad ukala duulaysay Bangladesh iyo Dubai ayay toogasho ku dileen ciidammada sida khaas ah u tababaran ee Bangladesh, sida ay warbaahinta guduhu ku warrantay.
Qofka laga shakisan yahay oo la sheegay in uu ku goodiyay in uu bistoolad qabo ayaa la dilay ka dib markii laamaha ammaanku ay si degdeg ah hawlagan u filiyeen sidaadii ay diyaaraddu si degdeg ah cago dhigatay Chittagong.
Waxaa badbaaday dhammaan 148 rakaab iyo shaqaalaha isugu jiray ee saarnaa diyaaradda ay leedahay shirkadda Biman Bangladesh Airlines oo duulimaad nambarkeedu ahaa BG147
Wali ma cadda sababta qofka laga shakisan yahay uu isugu dayay in uu diyaaradda afduubto.
Masuuliyiin ka tirsan ciidammada qalabka sida aayaa sheegay in nink laga shakisan yahay oo la rumaysan yahay in uu 25 jir yahay la dhaawacay markii la toogtay Axaddii balse uu wax yar ka dib geeriyooday, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
“Waxaan isku daynay in aan xirno oo uu is dhiibo, balse wuu diiday markaas ka dib ayaana tooganay,” ayuu yiri Sareeye Gaas Motiur Rahman.
“Bangladesh ayuu u dhashay waxaana ka helnay bistoolad aan wax kale wehelin.” ayuu intaas ku sii daray.
Wararkii hore ayaa sheegay in qofka laga shakisan yahay uu dhimirka ka xanuunsan yahay uuna dalbaday in uu la hadlo Ra’iisulwasaare Sheikh Hasina oo booqasho ku maraysa magaalo xeebeedka Chittagong.
Shaqaalaha diyaaradda ayaa walaac ka muujiyay ka dib markii la sheegay in uu u dhaqmayo si shaki leh, uuna bidhaamiyay in uu qorshaynayo in uu afduuban rabo diyaaradda, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Diyaaradda ayaa si degdeg ah la isugu gadaamay sidaadii ay u cago dhigatay garoonka Shah Amanat International ee magaalada Chittagong, iyadoo ay masuuliyiintuna isku dayayaan in ay la hadlaan qofka laga shakisan yahay.
Sawirro baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya dad badan oo taagan garoonka iyo diyaarad nooceedu tahay Boeing 737-800 oo gadaashooda ka